Indlela yokulahlekelwa amakhilogremu engeziwe ngaphandle kokulimaza emzimbeni.
Indlela ephumelelayo yokusho ukuhlelwa ngamaphilisi engeziwe iyisidlo semifino.
Uzokwehlisa isisindo kancane, kodwa angazi ukuthi yikuphi ukudla okumele ukhethe? Indlela enhle yokuqeda amakhilogremu angaphezulu kungaba ukudla okutshala imifino. Ukunakekelwa kwakhe akukhona nje ukuthi umzimba unqatshelwe amafutha amafutha, kodwa futhi awunalutho emzimbeni. Ngokukadokotela, le ndlela yokulahlekelwa isisindo kubhekwa njengenkululeko yentando yeningi, njengoba kanye nemifino eminingi amavithamini nezinye izakhi zingena emzimbeni. Abanye bakholelwa ukuthi le ndlela yokudla ingaba yindlela yokuvimbela isifo senhliziyo.
Iyini isisekelo sokudla?
Eqinisweni, konke kulula: usuku udinga ukudla isigamu kilogram yemifino nganoma yiluphi uhlobo.
Ukwenza ukudla kube okuhlukahlukene, ngezikhathi ezithile faka inyama ephansi yamafutha, amaqanda noma ama-oat flakes kwimenyu
Ungadla imikhiqizo yobisi enamafutha aphansi: i-yoghurt, ukhilimu omuncu noma i-yogurt
Udinga nje ukuxwayisa umthandi we "okusheshayo" ukulahlekelwa isisindo: ukulahlekelwa amakhilogremu ambalwa ngesikhathi esifushane kakhulu ngeke ukusebenza. Kungcono ukugcina ukudla okunjalo amasonto amabili noma inyanga.
Njengokunye okunye ukudla, kukhona uhlu lokudla ongayidla. Kulesi simo, kuzofaka:
konke ngaphandle kwemifino, kuhlanganise namazambane. Kulawa, ungalungisa isobho, ama-saladi nezitshalo. Futhi uma ubufuna ngempela i-sweetie, ungabhaka izingcezu ezimbalwa zewenge kuhhavini
qiniseka ukuthi udla amakhambi amasha: iparsley, dill, basil
ukuphuza kungcono ukusebenzisa amanzi amaminerali ngaphandle kwegesi, itiye eluhlaza ngaphandle kwe-ushukela noma i-yogurt engenamafutha ne-yogurt
kuvunyelwe ukudla amaprotheni ukudla: inyama yenkomo ebilisiwe, inkukhu namaqanda.
Kwakukhona ukulinganiselwa, nakuba konke kulula lapha. Ngaleso sikhathi, yila inyama enamafutha, ukudla okubhema nokuthengwa kwezimpahla. Uma isobho lipheka ungasebenzisi inyama umhluzi, futhi ama-saladi agcwalise ukhilimu omuncu noma amafutha emifino. Kubalulekile futhi unciphise kakhulu ukusetshenziswa kasawoti. Uma ungenalo ukudla okufisa ngaphandle kwalo, engeza umsila we-soy.
Sizokutshela zokupheka ezimbalwa ongayisebenzisa ukuze wenze ezihlukahlukene ekudleni. Ukudla kwemifino akusho ukuthi uzohambisana ngokuqinile nomyalelo wokudla izitsha ezithile. Ngakho-ke, ungashintsha i-oda lakho ngokuvumelana nezifiso zakho namathuba akho. Kodwa kufanele nje ukhumbule ukuthi ukudla kufanele kube mncane futhi kubatshele ukuthi kuhlukaniswe zibe izingxenye ezinhlanu.
Nazi izindlela ezimbalwa ongazitholela ngokukhululekile imenyu yakho ngesonto.
Isaladi kusuka kunoma imiphi imifino ene-cottage shizi. Isizini ngejamu lemon noma amafutha yemifino
Iqanda elibilisiwe nemifino
I-oat flakes nge izaqathe ezivuthiwe, zigcwele yogurt ephansi yamafutha
Ungaphuza ikhofi nobisi ngaphandle kokushukela noma itiye elihlaza
Ukudla kwasekuseni kwesibili kuvame ukusetshenziswa njengendlela yokudla okulula ngaphambi kokudla. Uma ungenza ngokuphepha ngaphandle kwalo, ke nje uphuze amanzi ngaphandle kwegesi. Kodwa lapho umuzwa wendlala usukhona, ungadla utamatisi owodwa, i-pepper noma ikhukhamba. Izaqathe ezifanelekayo nezingcolile.
Njengoba lokhu kungukudla okuyisisekelo, kufanele kuphathwe ngokucophelela okukhethekile.
Isaladi yamakhukhamba, utamatisi no-anyanisi ngekhilimu omuncu namazambane amabili abilisiwe
Lungisa i-vinaigrette bese wengeza ama-gramu ayizinkulungwane zezinhlanzi abilisiwe. Ungaphuza itiye elihlaza
Iklabishi enesitsheni neqanda lekhukhu elibilisiwe
Isobho semifino ngaphandle komhluzi. Esikhathini sesibili - amazambane owodwa abhakabisiwe kanye nezinamba ezimbalwa zama-peas aluhlaza
Ungasebenzisa isinkwa se-rye nesinkwa sokugcoba, kodwa ucezu olulodwa kuphela
Ukuze uthole isiphuzo, ungaphuza ingilazi yogurt bese udla pepper eyodwa elimnandi. Uma ufuna ngempela i-sweet, zama ithanga elibhaka nge-spoonful of honey.
Ukholifulawa othosiwe ku-batter
I-Asparagus ne-broccoli egqoke ngamafutha omnqumo
Ukuqhuma kwe-zucchini nesitshalo seqanda
Kubonakala sengathi konke kulula, kepha ngokusho kwezibuyekezo zabantu lokhu kuyindlela yokulahlekelwa isisindo kubhekwa njengendlela ephumelela kakhulu futhi ephephile emzimbeni. Kodwa ungakhohlwa ngomsebenzi womzimba. Kuphela ngale ndlela ungagcina isimo esihle eside.
Imithetho yokudonswa ngamanzi
Indlela esheshayo kakhulu yokulahlekelwa isisindo
Ukudla № 4: izimiso eziyinhloko zokudla zokwelapha, ukudla okuvinjelwe, isampula imenyu
I-Horoscope yowesifazane wase-Aries ngoJuni 2017
Iseluleko esidumile esizosiza ukukhulelwa
Owesifazane kufanele akwazi ukugoqa izinto ezingu-3: amathini, amehlo namahlaya
Ikhekhe "Usuku Nobusuku"
Anastasia Kostenko Ugqoka Izinto Olga Buzovoy
Ukudla okulula nge-cranberries
Izinto zokuphulukisa zesihlabathi
Umthandi we-Xenia Borodina owayengumngane wakhe wangquma ukuhlukanisa impilo yakhe ebuseduze
Kulungile, ukudla okunempilo nsuku zonke
Ukupheka kwama-pickle, izikhala zebusika
I-Kurban Bayram 2017: Siyakuhalalisela nge-SMS, amakhadikhadi namagama akho
Indlela yokubhekana ne-toxemia
I-crude sauce e-Pozharsky